Ny Belmont Report nandresy lahatra fa ny fitsipiky ny Justice miresaka ny fizarana ny enta-mavesatra sy ny mahasoa ny fikarohana. Izany hoe, tsy tokony ho ny raharaha fa iray tarika amin'ny fiaraha-monina mitondra ny vola lany amin'ny fikarohana raha mijinja ny vondrona iray hafa soa. Ohatra, ao amin'ny faha-19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20, ny enta-mavesatra ny manompo toy ny fikarohana ara-pitsaboana foto-kevitra ao amin'ny fitsapana dia voafafy teny betsaka amin'ny ny mahantra, sy ny soa azo avy amin'ny nihatsara fitsaboana nikoriana voalohany indrindra ny manan-karena.
Amin'ny fomba fanao, ny fitsipiky ny Fitsarana tamin'ny voalohany adika manodidina ny hevitra hoe ny olona mora tokony harovana mba tsy mpikaroka. Amin'ny teny hafa, ny mpikaroka tsy tokony havela fanahy iniana rembiny amin'ny tsy manan-kery. Izy io dia manahirana modely fa tamin'ny lasa, maro be ny olana pahamendrehana fampianarana efa tafiditra tena marefo mpandray anjara ao anatin'izany ny zara raha nahita fianarana sy disenfranchised olom-pirenena (Jones 1993) ; gadra (Spitz 2005) ; institutionalized, ara-tsaina ny ankizy sembana (Robinson and Unruh 2008) ; antitra ary debilitated hopitaly marary (Arras 2008) .
Manodidina ny 1990, na izany aza, fomba fijery Fitsarana nanomboka mitsingevaheva amin'ny fiarovana ny fidirana (Mastroianni and Kahn 2001) . Ohatra, ireo mafàna fo nilaza fa ny ankizy, ny vehivavy, ary ny foko vitsy an'isa ilaina ho mazava tafiditra amin'ny pitsaboana fitsapana mba vondrona ireo afaka mandray soa avy amin'ny fahalalana azo amin'ny alalan'ny fitsapana ireo.
Ankoatra ny fanontaniana momba ny fiarovana sy ny fidirana, ny fitsipiky ny rariny dia matetika no hevitry ny teny milaza hanangana fanontaniana momba ny mety onitra ho an'ny mpandray anjara-fanontaniana izay iharan'ny mafy adihevitra amin'ny fitsaboana ny etika (Dickert and Grady 2008) .
Raha mampihatra ny fitsipiky ny rariny ny telo hafa ohatra manome fomba hanombanana azy ireo. Mpandray anjara amin'ny tsy ny fampianarana no tambiny ara-bola. Encore mametraka fanontaniana sarotra indrindra momba ny fitsipiky ny Fitsarana. Raha ny fitsipiky ny Beneficence mety soso-kevitra ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena manavaka amin'ny famoretana governemanta, ny foto-kevitra ny Fitsarana dia afaka miady hevitra hanohitra fandavana ireo olona ireo ny mety ho mpandray anjara in-ary handray soa avy-marina fandrefesana ny sivana aterineto. Ny raharaha ny Andramo, karavato ary Time ihany koa ny mametraka fanontaniana. Amin'ity tranga ity, vondrona mpianatra iray mitondra ny enta-mavesatra ny fikarohana sy ny fiaraha-monina iray manontolo soa. Mba ho mazava tsara, na izany aza, izany dia tsy tena mora mponina. Farany, fihetseham-po areti-mifindra ny mpandray anjara dia ny santionany avy amin'ny mponina tena azo inoana fa handray soa avy amin'ny vokatry ny fikarohana, ny toe-javatra mifanaraka tsara ny fitsipiky ny Fitsarana.